Maalinta haweenka oo la xusay & madaxweyne Xasan oo ka qeybgalay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
8th March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu magaalada Muqdisho kaga qeyb galay Munaasabada Maalinta caalamiga ee Haweenka, iyadoo munaasabadan ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Haweenka ka qeyb galay Dumarka ka tirsan ciidanka qalabka sida.
Wasiiradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Sahro Maxamed Cali Samatar ayaa sheegtay in sanadkan 2015 ay ka shaqeynayaan horumarinta haweenka, iyadoo xustay in haweenka ay door muuqda ka qaataan dib u heshiisiinta.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbad dheer uu ka jeediyay Munaasabada ayaa waxaa uu sheegay xooga saarayaan sidii ay meesha uga saari lahaayeen caqabadaha ka hortaqaan xuquuqda haweenka in laga doodo, isagoo hambalyo u diray Haweenka Soomaaliyeed.
“Waxaan halkan ka qirayaa xushmad balaaranna u hayaa doorka haweenka Soomaaliyeed ha noqdeen kuwii hore, kuwa maanta jooga iyo kuwa mustaqbalka intaba, Haweenka Soomaaliyeed waxay muujiyeen karti iyo geesinimo labataankii sanno ee la soo dhaafey ee colaadda ay dalkeena ka jirtey, Iyaga oo xaalad adag ku jira ayay hadana waxay muujiyeen adkeysi, waxayna ku guuleysteen inay abuuraan rajo iyo rabitaankooda ku aaddan in nabad iyo kala dambeyn dalka lagu soo dabbaalo, Maanta haweenka waxay kaalimahooda kaga jiraan ganacsiga, adeegyada kala duwan ee nolosha iyo hoggaanka guud ahaan Soomaaliya” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa yiri “Caalamka ma jiro dal qura oo si dimoqraadi ah horumar ku gaarey iyadoo aaney haweenka kaalin buuxda ka qaadan qeybaha kala duwan ee adeegyada qaranka. Ka Madaxweyne ahaan, waxaa iga go’an xaqiijinta inaan meesha ka saarno caqabadaha ka hor imaan kara in xuquuqda haweenka laga doodo, si dhab ah wax looga qabto, lana ilaaliyo shuruucda ku saabsan hirgelinta xuquuqda dhameystiran ee haweenka . Hawlo badan ayaa ina horyaalla, kuwaas oo ay tahay inaan si wadajir ah u shaqeyno si wax loogu qabto haweenka Soomaaliyeed. Waa in meesha laga saara wax alaale wixii caqabad ku ah haweenka inay doorkooda ka cayaaraan bulshada dhexdeeda, in codkooda la maqlo ha noqoto bulshada oo dhan amaba si gaar ah. Iyadoo aanu wadno horumarinta hay’adaheena dowliga ah, waa inaan xaqiijinaa inaaney jirin wax caqabad ah oo ka hor istaagaya haweenka inay kaalin ku yeeshaan adeegyada bulshada ee kala duwan. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah waxbarashada oo loo baahan yahay in lagu baahiyo Soomaaliya oo dhan si ay gabdhaheena u helaan fursado waxbarasho oo la mid ah kuwa ay helaan wiilasha walaalahooda ah”.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale xusey doorka haweenka ay ka qaadan karaan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta.
“Dib u heshiisiinta, horumarka siyaasadda, amniga iyo xasiloonida waxay waxtar yeelan karaan amaba lagu horumarin karaa oo keliya marka gabdhaheena, kuwa inala dhashey, xaasaskeena iyo hooyooyinka la xishmeeyo, laga qeybgeliyo, lana dhegeysto,iyadoo xuquuqdoodana la dhowrayo sida sharcigu dhigayo.
Waxaan ku boorinayaa hay’adaha kala duwan ee Dowlada Federaalka Soomaaliya inay dedejiyaan shuruucda, xeerka siyaasadeed iyo nidaam horseedi kara in wixi hore laga soo gudbo , lana bilaabo bog cusub oo haweenka ay ku helayaan xuquuqdooda oo dhameystiran. Inagoo haddaba u dabbaaldegeyna maalinta Haweenka Caalamiga ee sannadka 2015, waxaa dhammaanteen la inaga doonaya inaan mudnaan gaar ah siinno maalintan nagu weyn’’.
Waxaa kale oo uu madaxweynaha ka hadlay waxqabadka dowladda, Hiigsiga 2016, dagaalka lagula jiro Al Shabaab iyo mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya.